Naqshad Cajiib ah Sababta Maxay tahay inaad u isticmaasho Blog Blog Istaraatiijiyada Suuq-geynta ee xaafaddaada
Waxaa jira siyaabo badan oo dadku u isticmaalaan si ay u qabtaan joogitaan online ah. Siyaabaha badankood, suuq-geynta dijitaalka ah ayaa qaabeynaya ololaha ololaha suuq-galka oo dhan. Shirkado badan ayaa ka faa'iideysan kara samaynta shabakad guul leh iyo hubinta in ay jirto socod joogto ah oo macaamiisha ah - vimar eicon evo. Qiimeeyayaasha intooda badan, Mashiinka Raadinta Mashruuca ayaa badanaa ah habka ugu wanaagsan ee loo fulin karo nidaamkan. Farsamadani waxay sameyn kartaa shabakad internetka ah oo leh xiriir joogto ah oo loogu talagalay booqdayaasheeda iyo sidoo kale mashaariic ku habboon oo lagu fulinayo adeegga macaamiisha SEO s.
Blogging waa farsamo kaas oo ka caawin kara shirkadda inay xiriir joogto ah oo degdeg ah la yeeshaan macaamiisha badan. Waxaad isticmaali kartaa blogging waxayna ka muuqan kartaa qaybaha ugu adag ee webka. Xaalado badan, blogs ayaa ka dhigi kara heerka aad u sareeya ee SERPs. Si kastaba ha ahaatee, cid waliba ma oga sida loo isticmaalo barta casriga. Qaar ka mid ah adeegyada SEO-ga ee ka dhigi kara boggaaga guusha ayaa ku jira tilmaamahan uu bixiyay Julia Vashneva, Maareeyaha Guusha ee Macaamilka ee Semt Adeegyada Dijital:
1. Isticmaal ereyada muhiimka ah iyo mawduucyada si aad ula qabsato suuqa. Wixii kasta oo suuq-geyn ah oo lagu guuleysto, keywords wuxuu abuuraa aasaas adag ee joogitaanka internetka. Waa wax muhiim ah raadiyaha muhiimka ah ee ku jira qaylada raadinta ee meesha ugu horeysa..Qabashada raadinta muhiimka ah ee muhiimka ah ayaa ka dhigi kara boggaaga internetka adeegyo SEO ah oo deg deg ah si dhaqso ah, sameynta geedi socodka oo dhan waa uu ku guuleystaa. Qodobbada muhiimka ah waa in ay ku jiraan qaybaha ugu waaweyn ee goobta ah taas oo ka dhigaysa adeegyada SEO-ga ee xaafaddaada inay sare u qaadaan darajadaada.
2. Adeegso magacyada maxalliga ah. Waxaa lagama maarmaan ah in lagu daro magacyada maxalliga ah ee ku yaal adeeggaaga SEO ee degaankaaga. Qalabkani wuxuu sameyn karaa mashiinka raadinta sida Google-gaaga taraafikadaaga ee ay ku leeyihiin konsalkooda Google Analytics. Magacyada magaalooyinka iyo deriska waa inay kuugu muuqdaan mawduucaaga iyo sidoo kale meelaha muhiimka ah sida khariidadaha Google haddii aad isticmaalayso mid. Inta badan baaritaanada maxalliga ahi waxay ku soo daraan magacyadan ereyada muhiimka ah, sameynta geeddi-socodka oo dhan wuxuu ku shaqeeyaa naftaada.
3. Muuqee dhacdooyinka deegaanka iyo arrimaha. Adeegyadaada SEO ee degmadaada si ay u eegaan sharci ahaan, waa inay ka hadlaan meesha aad ku nooshahay ololaha oo dhan. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa dhacdooyinka maxaliga ah sida dhacdooyinka sanadlaha ah, ama xitaa daboolaan arrimaha qaarkood ee saameynaya gobolka juquraafi ahaaneed ee ku yaal aaggaaga. Meelaynta adoo isticmaalaya magacyada noocaas ah waxay saameyn weyn ku yeelan karaan sida dadku u tixgeliyaan in ay riixayaan xiriirinta boggaaga.
4. La soco barta blogka ku yaala ganacsigaaga ganacsiga. Blog-kaagu waa inuu ku siiyaa juice link to domainkaaga, sii kordhaya kartida dadka ee ku howlan. Tusaale ahaan, blog wuxuu ku jiraa macluumaad gaar ah oo la xiriira dhagaystayaasha.
Raadinta Mashiinka Raadinta waxay ka caawisaa dad badan inay sameeyaan lacag ku filan oo ku filan. Ganacsatadu waxay shaqaaleyn karaan isticmaalka blogyada si ay u sameeyaan qaar ka mid ah xeeladahooga xeeladaynta raadinta aasaasiga ah. Waxaa suurtogal ah in la sameeyo adeegyo SEO ah oo ka shaqeeya horumarinta shaqadooda iyo sidoo kale isticmaalka blog si kor loogu qaado saameyntaas. Blog waa shabakado shakhsiyadeed oo keena ka qaybgalayaasha dhagaystayaasha iyo sidoo kale inay siiyaan jawi hawo ku haboon. Waxaad isticmaali kartaa tilmaan-bixintan si aad u sameysatid blog guuleysta oo aad sameyso bog internet ah.